Mpamorona sary 10 mila fantatrao | Famoronana an-tserasera
Raha misy toetra mazava sy tsy voavaha amin'ny tontolon'ny famolavolana sary, dia fifehezana tanora somary mifanohitra amin'izay mety amintsika izany. Na izany aza, tena nanam-bintana tokoa izahay nanatrika nandritra ny fotoana fohy ny fandraisana anjara mavitrika amina matihanina sy mpamorona sary maro eran'izao tontolo izao. Azo antoka hita loha sy angano izay hijanona ho an'ny taranaka izay nahatonga anay hianatra bebe kokoa momba ny tontolon'ny famolavolana ary, tsy isalasalana, noho izy rehetra, ny famolavolana androany no izy.
Eto izahay dia mizara ny top mpamorona sary folo izay ilaina mba hahazoana fahitana matotra sy matotra momba ny fifehezana antsika:
Teraka tamin'ny taona 1914 dia teraka tao Brooklyn izy ary nahatsapa avy hatrany ny fitiavany sary sy zavakanto ka nanatrika ny sekolin-javakanto tao New York izy ary avy eo ny Pratt Institute sy ny Parsons School of Design. Na dia teo aza ny fiofanana ofisialy sy akademika nataony dia tsy nahita mpanentana ampy ho an'ireny andrim-pampianarana ireny izy, koa dia nisafidy ny ho tonga mpanakanto nampiana-tena ary nahazo aingam-panahy avy amina gazety eropeana sasany, nahatsiaro ho voasariky ny sanganasa novokarin'i AM Cassandre sy Lazlo Moholy-Nagy . Na dia mpanakanto marolafy aza izy izay nikasika faritra maro tamin'ny famolavolana, dia nahazo fankasitrahana manokana izy noho ny asany orinasa ho an'ny orinasa toa an'i IBM, ABC na Westinghouse.
New Yorker tamin'ny nahaterahany, nifindra tany Los Angeles izy tamin'ny faha-25 taonany mba hianatra momba ny Graphic Design ary hahay manokana momba ny fanaovana pirinty sy ny sary mihetsika. Azoko antoka fa nahita ny sasany tamin'ny zavatra noforoniny ianao hatramin'ny niasany tamin'ny sarimihetsika toy ny Psycho, Anatomy of a Murder, Spartacus na The Man with the Golden Arm.
Nomena anaram-bosotra imbetsaka izy fa dadaben'ny typografia. Niasa amin'ny maha talen'ny zavakanto azy tamin'ny ankamaroan'ny vanim-potoana niasany izy, anisan'izany ny 1962, nantsoin'ny National Society of Art Directors ho talen'ny artista tamin'ny taona. Tahaka ny ampahany tsara amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny mpiara-mianatra aminy, dia nahay niasa izy nefa niavaka tamin'ny asany tamin'ny typografia ary indrindra ny fahatsapana nananany momba izany. Anisan'ny maro tamin'ny fandraisany anjara, nanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny taratasy sy ny fahitany azy ho mpiasan'ny hetsika izy ary ny fanovana ny lahatsoratra ho lasa sary sy hafatra manankarena sy misy dikany kokoa.
Nanokana ny tenany tamin'ny tontolon'ny doka sy ny fitarihana zavakanto izy. Azonao antoka fa ho fantatrao izy amin'ny asany amin'ny laharana MTV na dia niasa tamin'ny fanentanana Jiffy Lube aza izy. Izy koa dia talen'ny zavakanto tao amin'ny magazine Esquirre malaza izay niasany sy nanara-maso fonosana maro. Ity mpanoratra ity angamba dia iray amin'ireo solontenan'ny vanim-potoana volamena tamin'ny fanaovana doka.
Teraka tamin'ny 1989 tany Russia izy, na dia nifindra tany Etazonia aza izy tamin'ny 1930. Mpamorona sary, mpampianatra ary mpaka sary ny mpanoratra anay. Izy dia heverin'ny vondrom-piarahamonina ho toy ny iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny famolavolana fanontana araka ny ahalalantsika azy ankehitriny. Nandritra ny asany matihanina, nomeny firavaka tsy manam-petra izahay, maro amin'izy ireo no tao amin'ny magazine Bazaar Harper izay niasany nandritra ny roapolo taona mahery.
Mazava ho iray amin'ireo mpamorona sary nalaza indrindra tamin'ny vanim-potoana taorian'ny ady. Nanavao ny haino aman-jery pirinty i Bradbury tamin'ny fanitarana ny fampiharana ny sary pirinty tamin'ny heviny iray ary namela ireo fahafaha-misokatra misokatra ho an'ny mpamorona sary manaraka. Ny fandraisany anjara dia misy ny volavolany ho an'ny magazine Victory na magazine Mademoiselle. Izy koa dia talen'ny famolavolana tao amin'ny Art News and Art News Annual. Nanatanteraka fanavaozana typografika izy ary namolavola ny abidia Monoalalma izay namaranany ny fomba fanavahana manasaraka ireo endrika litera kely sy kely.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpamorona mpamokatra be indrindra tamin'ny taonjato faha-300 izay niavaka tamin'ny famolavolana rakitsoratra na boky. Anisan'ireo afisy maherin'ny XNUMX ny sarin'i Bob Dylan malaza, tandindon'ny taona enimpolo. Nanokana ny tenany ihany koa izy amin'ny famolavolana fanontana miasa ho an'i Paris Macht, L'Express, Esquire na La Vanguardia ary ho an'ny mombamomba ny orinasa mamorona ny sary DC Comics na Grand Union. Iray amin'ireo zavatra noforoniny marika famantarana indrindra, ny fampielezana ny Tiako New York dia mitohy tsy mitongilana rehefa mandeha ny fotoana, mampahatsiahy antsika ny halehiben'ny fahitany.
Nianatra tao amin'ny Pratt Institute izy noho ny vatsim-pianarana taorinan'ny nahazoany diplaoma izay nanampy azy hanohy ny fianarany ary avy eo nanomboka niasa ho mpamorona endrika ao Contempora. Tsy iza izy fa tsy talenta noho ny vehivavy talen'ny zavakanto voalohany tany Etazonia ary niasa tamin'ny orinasa lehibe toa ny Vanity Fair, Glamour na Vogue.
Ny mpanoratra anay dia nanova ny sary lamaody ho karazana sary hosodoko izay misy fiantraikany mazava amin'ny zavakanto sy plastika. Ny fomba fahitany manokana ny sary sy ny fakana izany amin'ny solomaso sy ny enta-mavesatra an-tsakany sy an-davany amin'ny zava-kanto dia tsy nanova ny foto-kevitra natsangana tamin'ny taona XNUMX, fa nahatonga azy ho nahita ihany koa. Niasa tamin'ny famoahana sary tao amin'ny magazine Harper's Bazaar izy nandritra ny roapolo taona mahery.
Izy dia mpamorona sary sy typografika fiaviana amerikana ary mpisava lalana mazava amin'ny endrika maoderina sy avant-garde. Tena nino ny herin'ny famolavolana izy ary nanaparitaka izany tamin'ny lafiny hafa manana ny finoana fa tokony hihatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana izany. Nandritra ny asany dia nandray anjara tamin'ny famolavolana boky, magazine, lamba, dokambarotra, katalaogim-barotra ary snsetera lava be izy. Niasa hatramin'ny 1946 tao amin'ny magazay malaza Look izy ary nangoraka ny fitsipiky ny Bauhaus. Ho azy, ny mpamorona dia tsy maintsy manenjika fomba feno amin'ny asany ary manatratra ny famolavolana ny lafiny rehetra amin'ny tetikasa, na inona na inona toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpamorona sary 10 mila fantatrao
Portfolio an'i Benjy Brooke